Semalt: Konke Okudingeka Ukwazi Nge-PHP Web Scraper Njenge-HTML Scrapper
PHP Web Scraper kusiza ukukhipha i-HTML ngokuzenzakalelayo kumakhasi ewebhu bese uyibonisa kumawebhusayithi ahlukene. Yini eyenza lolu hlelo lokusebenza luyingqayizivele ukuthi idonsa idatha kusuka endaweni ecacisiwe bese ibonisa kwenye indawo ngokuphindaphindiwe. Ngakho, njengoba okuqukethwe kwewebhusayithi yomthombo kuvuselelwa, uhlelo luzobe luhlahlela okuqukethwe bese lubeka phansi kuwebhusayithi yokuphela, ngaleyo ndlela igcine iwebhusayithi ivuselelwe futhi.
Isibonelo, uma udinga ukuthola izenzakalo zeBhola zamuva kusuka kuwebhusayithi ethandwayo njalo, faka i-URL yekhasi lewebhu lomthombo elihlanganiswe nomkhethi we-CSS ku-PHP web scraper. Izokwenza ikhodi. Manje uzofaka ikhodi kumakhodi womthombo wekhasi lakho, futhi lokho. Okuzoyithola ekhasini lakho kuyoba yikhokha yakamuva ekhasini lomthombo.
Leli thuluzi lihle ngokukhipha okuqukethwe okuvuselelwe njalo njengezikhundla, izingcaphuno zamasheya, amanani, kanye nezindaba ukukhuluma ezimbalwa. Le-scraper ye-HTML ingenye yezinto ezinhle kakhulu ngoba kulula ukuyisebenzisa, inikeza ukusebenza okuphezulu, isebenza cishe kuzo zonke iziphequluli, futhi okubaluleke kakhulu, kuhambisana nokwesekwa kwekhwalithi.
Ngeshwa, uhlelo lokusebenza lungase lungakwazi ukukhipha idatha kusuka kwamanye amasayithi. Ngakho-ke, kuhle ukuba uzame ngaphambi kokuyithenga. Njengamanje, i-scraper ayikwazi ukukhipha amavidiyo avela ku-Vimeo, YouTube, namawebhusayithi amaningi okwabelana ngevidiyo.
Izimpendulo zemibuzo evame ukubuzwa
Ungakwazi ukukhipha okuqukethwe kumakhasi amaningana bese uyibonisa ekhasini elilodwa nale thuluzi. Kudingeka nje ukhiqize ikhodi kumakhasi omthombo ngamunye faka ngaphakathi kwikhodi yomthombo wekhasi ofuna ukuboniswa ngalo.
Ngaphezu kwalokho , kungenzeka ukukhipha izakhi eziningana ezivela ekhasini elifanayo lomthombo.
Akunakwenzeka ukuhlanganisa amakhasi wewebhu ngaleli thuluzi ngoba lokho akuyona injongo yalo.
Nakuba lolu hlelo lokusebenza alusekeli iZwiPress, kukhona ithuluzi elihlukile le-WordPress.
Ungasebenzisa i-CSS ukuze isitayela i-HTML ekhishwe
Ungathola kuphela i-HTML yakamuva ekhishwe ngokuqabula ikhasi lakho lewebhu. Ukusebenzisa isibonelo sebhola leBhola futhi, uma amaphuzu wokugcina owubonile kwakungu-0 - 0 futhi amaphuzu ashintsha ku-1 - 0, ngeke uwubone ekhasini lakho lewebhu uze uvuselele.
I-HTML ekhishiwe izovela kukhasi lakho lewebhu ngefomethi ye-HTML ngaphandle kwe-CSS.
Ekuphetheni, kutuswa ukusebenzisa leli thuluzi ngokusemthethweni. Njalo ufune imvume kubanikazi banoma yiliphi ikhasi lewebhu ngaphambi kokubamba okuqukethwe kwe-HTML kuso. Uphelele ngokwakho ngokusebenzisa leli thuluzi Source .